အလုပ်မှာ Motivation ပျောက်နေပြီဆိုရင် – Live the Dream
အလုပ်မှာ Motivation ပျောက်နေပြီဆိုရင်
အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ?
အလုပ်တစ်ခုမှာ လုပ်လာတဲ့ သက်တမ်းကြာလာတဲ့ နဲ့ အမျှ အကြောင်းအမျိုး မျိုးကြောင့် လုပ်ချင်ကိုင်ချင်တဲ့ Motivation တွေ အလိုလိုပျောက်ဆုံးလာတတ်ကြပါတယ်။ လူဆိုတဲ့ သဘောကလည်း တစ်ခုခုကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်နေရရင် ပျင်းရိငြင်းငွေ့ လာတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား? ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒီအလုပ်တွေကိုပဲ နှစ်နဲ့ချီ လနဲ့ ချီလုပ်လာရတာ ကြာလာရင် ရိုးအီလာတတ်ကြလေ့ရှိကြမှာပဲ။ မင်မင်ကိုယ်တိုင်လည်း Motivation တွေ ပျောက်ဆုံးနေတတ်သူဖြစ်သလို မင်မင်လိုပဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ Motivation ပျောက်နေသူတွေ ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းအချို့ ကို လေ့လာရသလောက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်။
အလုပ်ထဲမှာ ပျင်းလာပြီ Motivation ပျောက်လာပြီဆိုရင် အလုပ်ထွက်ဖို့ ကို စဉ်းစားမိကြမှာပါပဲ။ အလုပ်ထွက်ဖို့ မထွက်ဖို့ ကတော့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကို ဆိုပေမဲ့ အလုပ်မှာ ပျင်းလာတာကြောင့် ရေရှည်အစီအစဉ်မရှိဘဲ ထွက်လိုက်တာမျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ အလုပ်မထွက်ခင်မှာ ရေရှည်တော့ ကြိုတင်စဉ်းစားရဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေး တွေရှိနေလို့ အလုပ်ထွက်ရမဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ မရှိသေးလို့ လက်ရှိအလုပ်ကို ဆက်ပြီးရွေးချယ်နေအုန်းမဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အလုပ်ခွင်မှာ Motivation တွေ ပြန်တက်လာအောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် လက်ရှိအလုပ်ကနေလည်း တိုးတက်မှုတွေရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
Motivation တွေပျောက်နေတတ်တာ လူက အနားယူဖို့ လိုနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖုန်းတွေ ကွန်ပျူတာ တွေတောင် အချိန်တစ်ခုကြာရင် အားတွေ ပြန်သွင်းပေးရသလိုပဲ လူတွေမှာလည်း စွမ်းအင်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါ ပြန်လည် အသက်သွင်းဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း အနားယူတဲ့ ပုံစံတော့ တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်ယူပြီး အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း အနားယူတာဖြစ်ဖြစ် မိသားစု နဲ့ အချိန်ကုန်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် အပျော်ခရီးထွက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန် နဲ့ ကို အနားယူလိုက်ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ ဆရာတွေ စီနီယာတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ motivation တွေမရှိတော့တဲ့ အကြောင်းပြောပြပြီး အကြံယူကြည့်တာမျိုးလည်း ကောင်းပါတယ်။ မင်မင်အနေနဲ့ ကတော့ vacation ခရီးလေးထွက်ကြည့်ဖို့ ကို အားပေးပါတယ်။ ကဲ ပိတ်ရက်တွေလည်း များနေတုန်းလေး ခရီးထွက်ဖို့ အစီအစဉ် ခုပဲ စလိုက်တော့….။
Motivation ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခါတစ်လေကျ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ကိုယ့်အပေါ် feedback ပေးဖို့ ပြောကြည့်ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကိုပေါ့။ ဒါမှ ကိုယ်လည်း ဘာတွေ ပြုပြင်ရမယ် ဘာတွေလိုအပ်တယ် ဆိုတာသိမယ် ဘယ်အချက်တွေမှာ အားသာတယ်ဆိုတာ သိတဲ့ အခါရှေ့ ဆက်ဖို့ ခွန်အားတစ်ခုခုတော့ ဖြစ်လာမှာပါ။
Business တွေ အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ Vision တွေ Mission တွေရှိလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီ Vision တွေက လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အဓိက value ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Value မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲ သလို ရေရှည်လည်း မရပ်တည်နိုင်ကြပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ Business တွေ ဆိုတာ အကျိုးအမြတ် တစ်ခုထဲ ကိုမကြည့်ဘဲ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကျိုးုပြုဖို့ ဆိုတဲ့ တန်ဖိုး တစ်ခုက ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအရ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပညာရေး စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး နေထိုင်ရေး ဘယ်ကဏ္ဍမှာ အကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ရှာဖွေ တတ်ဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်မှာ motivation ပျောက်နေရင် ကိုယ့်အလုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို တွေးကြည့်ပြီး တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါစေ။
၅. Skills အသစ်တွေသင်ယူပါ
လေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာကတော့ ဘဝမှာ ရပ်တန့် လို့ မရတဲ့ အရာတွေ ထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အစပိုင်းမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ တွေက လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် သာမန်လုပ်နေကြ အလုပ်တွေပဲ လုပ်နေရင်း ငြီးငွေ့ လာပြီးတော့ အလုပ်မှာ Motivation တွေ ပျောက်နေတာမျိုး က ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ့်အလုပ်အပြင်မှာမှ ဆက်စပ်တဲ့ ပညာရပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောက်ထပ် စကေး အသစ်တစ်ခုခုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလည်း တစ်မျိုး ပျော်စရာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်က အရောင်းပိုင်းဆိုရင် အလုပ်ပါးတဲ့ အချိန် ရုံးထဲက တခြား ဌာနတွေရဲ့ အလုပ်တွေ လိုက်လေ့လာကြည့်တာမျိုး ပေါ့။ ဒီဇိုင်းဖန်တီးတဲ့ အပိုင်းတွေ စီမံခန့် ခွဲ တဲ့ အပိုင်းတွေ စသဖြင့် စကေးအသစ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရတာလည်း ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ အဲလိုလေ့လာကြည့်ရင်လည်း ကိုယ်ရဲ့ talent အစစ်အမှန်ကို တွေ့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကတော့ အလုပ်မှာ motivation ပျောက်ပြီး လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး ဆိုရင် တခြား ဘာမှမစဉ်းစားပါနဲ့ ။ ကိုယ့်အတွက်ကို ပဲ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ဝင်ငွေတွေရှာနေရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းက ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ပဲ မဟုတ်လား…။ ဒါကြောင့် နောက်တစ်ခါလောက်များ အလုပ်မှာ motivation ပျောက်လာပြီဆိုရင် ငါ့အတွက်ငါကြိုးစားရမယ်။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ အားကိုးစရာမလိုပဲ ဘဝမှာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အတွက်ကို အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ ကြိုးစားရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်လေးသွင်းပြီး အားတင်းထားပါနော်။